အားလပ်ချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မဲ့နည်းလမ်းများ - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Knowledge » အားလပ်ချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မဲ့နည်းလမ်းများ
Min Thuta | Knowledge | January 4, 2019
ယခုခေတ်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းအလုပ်ကိုယ်စီနဲ့အမြဲလှုပ်ရှားရုံးကန်နေရပြီး အားလပ်ချိန်ရဖို့ရန်အလွန်ပင်ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရခဲလှတဲ့မိမိရဲ့အားလပ်ချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်မှာဝါသနာအလိုက်သင်တန်းတွေတက်ခြင်းဟာဗဟုသုတရဖို့ရန်မက ကိုယ့်ရဲ့အလုပ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်အနာဂတ်မှာလုပ်မဲ့အလုပ်အတွက်လည်း အထောက်အပံ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်း အရည်အသွေးတွေကို မြှင့်တင်ရာလည်းရောက်ပြီး မသိသေးတဲ့အရာတွေကိုလည်းလေ့လာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆို ပန်းချီသင်တန်း,ကြက်ခြေနီသင်တန်း,မုန့်ဖုတ်သင်တန်းအကသင်တန်းစတာမျိုးတွေတက်လို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချရာလဲရောက်ပါတယ်။
ဟင်းချက်တာကိုအိမ်မှုကိစ္စအနေနဲ့သဘောမထားပဲဝါသနာအရချက်ကြည့်ပါ။ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်ကိုယူပြီးဟင်းချက်နည်းတွေကိုစမ်းချက်ကြည့်ပါ။ဟင်းချက်နည်းအသစ်တွေစမ်းပြီးချက်ကြည့်ခြင်းဟာလဲ မိမိရဲ့အားလပ်ချိန်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ရုံမက ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတဲ့ အလေ့အကျင့်ကိုရစေပါတယ်။ယခုခေတ်မှာတော့ ဟင်းချက်နည်း video အမျိုးမျိုးကို online ကနေလဲလေ့လာလို့ရနေပါပြီ။
မိမိအလုပ်အတွက်လည်းအဆင်ပြေပြီးမိမိမသင်ယူရသေးတဲ့ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်ယူပါ။စိတ်တည်ငြိမ်မှုရစေရုံသာမက မိမိမသိသေးသော နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုပါသိရှိရပြီးဗဟုသုတလဲရစေပါတယ်။ မိမိသင်နေတဲ့ဘာစာစကားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်း၊စာအုပ် စတာတွေကိုပါလေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။
ချစ်စဖွယ်ကျန်းမာစိုပြေတဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး ရရှိနိုင်မဲ့အလွယ်နည်းလမ်းလေးတွေ
by Min Thuta on April 7, 2019 -0Comments
နူးညံ့လှပပြီး ဖူးဖူးပြည့်ပြည့် နှုတ်ခမ်းသားတစ်စုံကိုတော့ မိန်းကလေးတိုင်း လိုချင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် အလွယ်တကူနဲ့အဆင်ပြေစေမဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...
by Min Thuta on April 28, 2019 -0Comments
အခုအချိန်မှာ အပူချိန်မြင့်မား နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် အပူဒဏ်ခံနိုင်ပြီး အပူဒဏ်သက်သာစေရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် နေထိုင်ပုံနေထိုင်နည်းတွေ ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်... အပ...
သင့် Typing Skill ကိုပိုမို တိုးတက်လာစေနိုင်ဖို့ အချက်တစ်ချို့
by Min Thuta on May 19, 2019 -0Comments
အခုလို အားလပ်ရက်လေးတွေမှာ လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာအကျိုးုပြုစေမယ့် အချက်လေးတွေ ကို လေ့လာ လေ့ကျင့်နိုင်ရန် သင့်ရဲ့ Typing Skill တိုးတက်လာစေနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးချင်...
မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု (Self Confidence)
by Min Thuta on May 30, 2019 -0Comments
မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု (Self Confidence )ဆိုတာ ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးနီးပါးအတွက် အဓိကအရေးပါပါတယ်။ Self Confidence ရှိတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို သူတ...
အောင်မြင်တဲ့ Teamwork ဖြစ်စေဖို့ Tips ဆယ်ချက်
by Min Thuta on June 1, 2019 -0Comments
"ပြိုင်တူတွန်းလျှင်ရွေ့နိုင်သည်" ဆိုတဲ့စကားပုံဟာ Teamwork ကောင်းရှိခြင်းကိုထင်ဟပ်စေတဲ့စကားပုံတစ်ခုပါ။Teamwork ဆိုတာနဲ့ အားကစားလုပ်တာလိုမျိုး အသင်းအဖွဲ့နဲ့လု...
motivation Phone Battery Technology Telecom ကျန်းမာရေး ကြိုးစားမှု ဇွဲ ပတ်ဝန်းကျင် ပုံပြင် ဗဟုသုတ ယုံကြည်မှု ဟာသ
See Latest Ad Posts
I want to sell My LEXUS LX570 2017 MODEL for Ramadan May 31, 2019
50/51 GSM Sim Card ေစ်းေကာင္​းေပးမည္​။ May 31, 2019
2016 Mercedes Benz G63 AMG May 2, 2019
Samsung Galaxy S9 plus 256GB samsung Note9 May 2, 2019
Best price Apple iPhone Xs Xs Max Free Shipping May 2, 2019
Mercedes Benz ML63 AMG 2014 May 2, 2019
2013 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon May 2, 2019
For sale iPhoneX 8plus77plus 6s 6splus Note8 Note9 April 8, 2019
MG6MG6 MG550 Car radio GPS android April 8, 2019
© 2019 Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog. All Rights Reserved.
All times are GMT 6.5. The time now is 10:53 pm.